Bayder Myanmar News – Page2– Cele , Baydin , Tech, Entertainment
မီးပုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကော င်းတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးအဖြစ် တွေ့မြင်ရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
October 15, 2019 adminshwekayin Comments0Comment
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးချောလေး ပတ်ထရစ်ရှာက စူးရှတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူလေးပါ။ အချိုးအစားကျနပြီး လှပလွန်းတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အလှကို လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ လုံခြုံပြီး ခေတ်မှီတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စတိုင်လ်ကျပြီး အမြဲလန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကို မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးအဖြစ် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရှာက သီတင်းကျွတ် အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ မီးပုံးလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း “Happy Thadingyut Full Moon Day! 🎇🌕ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော သီတင်းကျွတ်ြ ဖစ်ပါစေရှင့် 🙏🏻” ဆိုပြီး ဆုတောင်းစကားလေး ဆိုထားပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရှာက လက်ရှိမှာတော့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးတဲ့ “လူထဲကလူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကို မြင့်မြတ်၊ အောင်လေး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခင်လှိုင်၊ ဂွမ်းပုံတို့နဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ေ နတာပဲ ဖြစ်ပြီး အခြားသော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင်နေလျက် ရှိပါတယ်။ လူငယ်ဆန်ဆန် ပုံစံလေး အမြဲတမ်းတွေ့မြင်ရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာက အခုလို မြန်မာဆန်ဆန်ေ လးနဲ့ဆိုတော့လည်း အရမ်းကို ကျက်သရေရှိရှိ လှနေတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြားလည်း ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့…
သီတင်းကျွတ်ကို ချစ်ရတဲ့ သားသ မီးေ တွနဲ့ ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်
နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်က သူမချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း မိသားစုလေးကို အချိန်ပေးဂရုစိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်နေသလို အိမ်ထောင်မှုတာဝန်တွေလည်း မလစ်ဟင်းတဲ့ သက်မွန်မြင့်က ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်မှာ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အတူတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်က သီတင်းကျွတ်နေ့လေးမှာ သားလေးအားချစ်နဲ့ သမီးလေး လဝန်းတို့ကိုလည်း တစ်နေကုန်အချိန်ပေး ဆော့ကစားပေးခဲ့သလို လူကြီးမိဘတွေကိုလည်း လိုက်လံကန်တော့ခဲ့ ကြ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ သားအမိ၊ သားအဖတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဆီမီးထွန်းပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့ကာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အေးချမ်းစွာပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်က လက်ရှိမှာတော့ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးပေးနေသလို ဒေါင်း၊ ဖွေးဖွေး၊ ခါရာတို့နဲ့အတူတူ “Love Equations” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်ကတော့ သီတင်းကျွတ်ညလေးကို မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သက်မွန်မြင့်တို့ မိသားစုရဲ့ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်တွေကို သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ Rowena Source: Thet Mon Myint’s fb,Reference&Credit:momolay.com
ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တစ်ဦး သေ ဆုံး မှု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှဝေခဲ့တဲ့ စာသားကြောင့် တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ဇေရဲထက်
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကိုရီးယား အနုပ ညာ ရှင်တစ်ဦး သေဆုံးမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ တော်တော်များများက စိတ်မကောင်ြး ဖစ်ေ နတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် မိန်းကလေးဟာ အသက်(၂၅) နှစ်သာရှိသေးပြီး အရမ်းကို ငယ်ရွယ်သေးတာမို့ ပရိသတ်တွေက နှမြောပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇေရဲထက်ကလည်း ထိုကိုရီးယားအနုပညာရှင် မိန်း ကေ လးအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်ကာ စိတ်မကောင်းစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ဇေရဲထက်ပြော လိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်ချို့က ပရိသတ်တွေအတွက် အထင်အမြင်လွဲစရာဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဇေရဲ ထက် က အခုလိုပဲ ပြန်လည်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ” ပြောပါ။ ဆဲပါ။ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့ ပိုစ့်ကိုဖျက်တာက လည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ fan တွေနဲ့စကားများ မှာစိုးလို့ဖျက်ပးတာပါ။ ကျွန်တော်တင်တဲ့ပို့ စ်မှာလည်း ထိခိုက်ပါစေ။ စာနာမှု့ကင်းမဲ့စွာ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူ။ ညီမလေးသတ်သေတာ မတန်ဘူး လို့ထင်လို့ပါ။ အိုကေ..အာ့ဒီ့အတွက် မှားတယ်ထင်လည်း ကျွန်တော် ခံပါ့မယ်။ အမုန်းတွေမပွားချင်လို့ပါ။ “ “ဒါပေမယ့်ကျနော်လည်းခံစားတတ်တဲ့လူပါ။ ကဲ..ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်တွေလည်း ကျွန်တော့်ေ ကြာင့် အပြောခံခဲ့ရရင်လည်း🙏🙏🙏 အရေးကြီးတာက…
ရုပ်ရှင်သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲမှာ အမှတ်တရပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
October 14, 2019 adminshwekayin Comments0Comment
ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော်လေး သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ရဲ့ သမီးငယ်လေး သဇင်ထူးမြင့်ဟာ ဆိုရင် ရွှေကြို လုပ်ရာကနေ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ခုဆိုရင် ကြော်ငြာများနဲ့ photo Shooting များကိုလည်း လက်ခံ ရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ပုံရိပ်က လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်က ရွှေကြို မှာ ပါဝင်ပြီးကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေ တောက်လျှောက် လုပ်ကိုင်နေသလို သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားေ ပးခြင်း များစွာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက သီချင်း video လေးတွေမှာလည်း သရုပ်ေ ဆာင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သဇင်ထူးမြင့်က ( ၄၂ ) ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှ သူမတို့ရဲ့ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့် က ” မနေ့ က ရုပ်ရှင်သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲက အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ🌸ကိုယ်ရဲ့ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကဘေးချင်းကပ်ဆိုတော့အေးဆေးပဲ မုန့် တွေယူစားတာပေါ့ ဟီးးးး😁” ဆိုပြီြးေ ပာထားပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ ပုံလေးတွေကို…
ပည်သူချစ် အနုပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီက အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်နီးပါး တိုင်တိုင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံလို ချစ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူး နဲ့ ရွှေမှုံရတီက အနုပညာလျှောက်လှမ်းကိုယ်စီမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ကိုယ်စီရရှိနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီကို တစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက် တြွဲ ဖစ်စေ အားပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မနေ့က အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှာတော့ ရွှေထူးက Lil’Z၊ X-box၊ ထက်ယံတို့နဲ့ အတူတူ ရန်ကုန်မြို့ Rose Garden Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့4Reunion” ပွဲကြီးမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပွဲလေးမှာ ရွှေထူးရဲ့ ချစ်ဇနီးလေး ရွှေမှုံရတီလည်း လိုက်လာပြီး ပရိသတ်တွေကို surprise လုပ် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက ရွှေထူးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း ဂီတဘက်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်လာတာဖြစ်ပြီး “အမှား” နဲ့ “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွှေမှုံလေးကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရွှေထူးရဲ့ အရိပ်ကလေးအတိုင်းပဲ အနောက်ကနေ တကောက်ကောက် ပါရမီဖြည့်ပေးနေသူလေး…
ဆယ်ကျော်သက်လေးလို နုနယ်ပြီး လှေ နတဲ့ အေးမြတ်သူ
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင် မှုအပိုင်းမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆင်ပေးခဲ့ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပွဲတက် ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူက စစ်ကားရုပ်ရှင်ကားကြီးကို သရုပ်ဆောင်နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ထူးအောင် ၊ အနုပညာရှင်များစွာနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမအပါအဝင် ၊ ထွန်းထွန်း၊ ရန်အောင် တို့နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ တန်ဖိုးရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကလည်း စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးမြတ်သူက မန္တလေးမြို့မှ Bella ပွဲကို လူငယ်ဆန်တဲ့ ဂါဝန်လေးနဲ့ အမိုက်စား ပွဲတက်ခဲ့တာပါ။ အေးမြတ်သူ က ” မ​နေ့ က ..ခုလိုချိန်​လေးမှာ Bella ရဲ့ ST⭐R TOUR အစီစဉ်​လေး နဲ့ မန္တ​လေးမြို့ ကMingalar Mandalay မှာ ချစ်ရသူ​တွေနဲ့ ဆုံ​တွေ့ခွင်​တွေရ…. တူတူဓါတ်ပုံ တွ ရိုက်ခဲ့ရတာ ​ပျော်စရာကြီးရှင့် ။ဒီ​နေ့လည်း ….မိတ္ထလာမြို့…
ချန်ပီယံရွှေခါးပတ်က အောင်လအန် ဆန်ကလွဲပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ မထိုက် တန် ဘူးဆိုတဲ့ အောန်ဆိုင်း
ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ One Championship လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီ ယံဘွဲ့ကာကွယ်ပွဲကြီးက အဆုံးသတ်လှပစွာ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ One Championship 100 Century ပွဲစဉ် ရဲ့ Main Event အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသား MMA အားကစားသမား အောင်လအန်ဆန်နဲ့ စိန်ခေါ်သူ ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဘရန်ဒန်ဗီရာတို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အောင်လအန်ဆန်က ဒုတိယအချီမှာပဲ ဒိုင်ပွဲရပ် အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ကို နိုင်ငံကျော် မော်ဒယ် အောန်ဆိုင်းကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံအထိ လိုက်ပြီး အားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန် အနိုင်ရရှိချိန်မှာတော့ အောန်ဆိုင်းလည်း တော်တော်ကြီး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အောန်ဆိုင်းက အောင်လအန်ဆန်ကို “မင်း ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲတယ်။ ဒီလိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ရွှေခါးပတ်ဆုက မင်းကလွဲပြီး ဘယ်သူနဲ့မှမထိုက် တန်ဘူး” ဆိုပြီး ဝမ်းသာ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုထားပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ အသည်းမာလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာကို (၂) ချီအတွင်းမှာပဲ အလဲထိုးပြီး အာရှတိုက်ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ပြိုင်ဘက်မရှိသူရဲကောင်းဆိုတာကို ပြသသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း အောန်ဆိုင်းနဲအတူတူ ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်အတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။…
အမိုက်စား Pose များနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အောန် ဆိုင်း
နိုင်ငံကျော် စူပါမော်ဒယ် ကချင်တိုင်းရင်းသူလေး အောန်ဆိုင်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲသူလေးပါ။ သူမရဲ့ ချောမောလှပတဲ့ မျက်နှာလေးရဲ့ ကျစ်လစ်လှပ တဲ့ Body ကြောင့်လည်း သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးပရိသတ်တွေအတွက် စူပါမော်ဒယ်လ် အောန်ဆိုင်း ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အောန်ဆိုင်းက အင်တာနယ်ရှင်နယ် မော်ဒယ်လ် တစ်ဦးလို့ ပြောလို့ရပါတယ် ။ သူမ ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာမက နိုင်ငံခြားမှာ ရော လုပ်ကိုင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမြဲတမ်း Fashion အလန်စား များ နဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးလေးတွေကို လည်း သူ့ပရိသတ်တွေအတွက် ချပြတတ်သူပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အောန်ဆိုင်း က ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှနေခဲ့တာပါ။မော်ဒယ်လ် အောန်ဆိုင်း ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူေ ပးကြပါဦးနော်။ နိုင်ငံကျော် စူပါမော်ဒယ် အောန်ဆိုင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ Moekalay Source;awn seng,Reference&Credit:momolay.com
Sulli သေဆုံးတဲ့သတင်းမှ န် ကန်ကြောင်း ရဲတွေအတည်ပြု
နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ f(x) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ Sulli တစ်ယောက် သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရဲတွေဆီကနေတဆင့် သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ Sulli ကို သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ သေဆုံးလျှက် စတင်တွေ့ရှိသူ ကတော့ သူမရဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်ပြီး ရဲတွေကိုလည်း အဆိုပါ မန်နေဂျာက အသိပေးအကြောင်ြး ကားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းအရင်း အတိအကျကိုတော့ ရဲတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှက်ရှိပြီး ပရိ သတ်ေ တွကတော့ သူမကိုယ်သူမ အဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလျှက်ရှိကြပါတယ်။ Sulli သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို ရဲတွေဘက်က အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဆိုေ ပမယ့် လည်း သူမရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ SM Entertainment ကတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ပေး ထာြး ခင်း မရှိသေးပါဘူး။ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀ကို ရောက်ရှိပါစေ… Sulli ရေ။ Ref :SBS Star Mia (Momolay)
သူ့ချစ်သူကို စုန်းမနဲ့တူတယ်လို့ ဝေဖန်သူကို ထိထိမိမိ တုံ့ပြန်လိုက် တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသား Mikis Weber
မြန်မာပြည်ကို ချစ်လို့ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဂျာမနီနို င်ငံသားလေး Mikis Weber နဲ့ မြန်မာမလေး စုစုဝေတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုတွေအပြည့်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို နှစ်ကိုယ်တူပုံဖော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမလေးကို သဲသဲလှုပ်ချစ်တဲ့ Mikis ကတော့ လတ်တလောမှာ ချစ်သူေ ကာင် မလေးက ရုပ်ဆိုးလို့ စုန်းမနဲ့တူတယ်လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဝေဖန်တဲ့သူအပေါ် ပညာသား ပါပါနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သူကို နည်းနည်းမှအထိမခံတဲ့ Mikis ကတော့ ချစ်တတ်လွန်းသူကြီးပါပဲနော်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ချစ်သူကို စုန်းမရုပ်လို့ ဝေဖန်တဲ့ သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသား Mikis Weber ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုပါ ဝေဖန်သူကတော့ Mikis ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို အမြင်ကပ်လွန်းလို့ စုန်းမရုပ် နဲ့တူတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ ဝေဖန်မှုကို မြင်မြင်ချင်းပဲ Mikis က “stay cool and stand for your woman… hate is whack 🙃ငါ့ကောင်မလေးကိုထိလို့မရဘူး ငါကကျားအေ မလိုပဲ 🐅🐅😆” ဆိုပြီး သူ့ကောင်မလေးကိုထိရင် နည်းနည်းလေးမှမခံတတ်တဲ့…